LibreOffice 7.1.1 yasvika ichigadzirisa zvinopfuura zviputi makumi mapfumbamwe | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi wapfuura, Iyo Gwaro Sisekelo yakakanda vhezheni yehofisi yake suite yaakange anonoka, muchidimbu, nekuti aida nguva yekutsanangura chimwe chinhu. Uye ndezvekuti, yakarongerwa v7.0 uye kubva pa v7.1, yakasarudzika nzira yemahara yeMicrosoft Office yakaunza zita rekuti «Nharaunda», chimwe chinhu chinoshandira kusiyanisa izvo zvinochengetwa nenharaunda ine rutsigiro rwushoma uye Shanduro yebhizinesi. Ngazvive sezvazviri, kubva masikati ano pane vhezheni itsva: LibreOffice 7.1.1.
LibreOffice 7.1.1 ndiyo yekutanga poindi yekuvandudza mune dzino nhevedzano, zvinoreva kuti iri pano kupora software. Zvinoenderana neThe Document Foundation, chikamu ichi chinosanganisira pamusoro pe90 bug fixes uye inovandudza kuenderana kwegwaro, izvo zvinowanzoreva kupinza / kutumira kunze kubva kana kuMicrosoft Office zvino ichave yakavimbika.
LibreOffice 7.1.1 haisati yakurudzirwa yezvikwata zvekugadzira
Iyo Gwaro Foundation haritaure mu kusunungura chinyorwa ndeapi nhau akaverengerwa, muchidimbu nekuti ivo vakatarisana nekuvandudza izvo zvatovepo. Hongu vatora iyo nguva ku tiyeuchidze kuti sarudzo yakanakisa ndeye Enterprise, sezvo inosanganisira yenguva refu yekusarudza sarudzo, rubatsiro rwehunyanzvi, pane-kudiwa kana zvakagadziriswa mabasa uye zvimwe zvakanaka. Zvine musoro, uye sekuratidzwa kwazvinoitwa, izvi zvichave zvakakosha kana tikashandisa bhizinesi, asi kwete kune vedu vanoshandisa LibreOffice pano neapo.
Kuburitswa kweLibreOffice 7.1.1 zviri pamutemo, saka tinogona ikozvino kurodha pasi kubva peji rekurodha peji, iro ratinokwanisa kuwana kubva pano. Semazuva ese, sarudzo mbiri dziripo, v7.1.1 iyo inosanganisira zvese zvitsva uye v7.0.4, iyo inosara zvishoma kumashure mumabasa, asi kumberi mukugadzikana. Neichi chikonzero, TDF inopa yechipiri yekugadzira michina.
Kana zviri izvo zvinoshandiswa nevashandisi veLinux kubva ipapo, isu tinazvo RPM mapakeji, DEB uye iyo kodhi. Iyo yekuvandudza ichave ichiuya nekukurumidza ku Flathub uye kune dzimwe nzira dzezvimwe zvinogoverwa, senge "nyowani" inoshandiswa neayo akavakirwa paArch Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.1.1 yasvika ichigadzirisa zvinopfuura zviputi makumi mapfumbamwe uye kuvandudza kuenderana